हानेदा कि नारिता एयरपोर्ट, कुन चाही छान्दा राम्रो? | Japan Info - नेपाली
Japan Info > Japan Info - नेपाली > HOW TO > हानेदा कि नारिता एयरपोर्ट, कुन चाही छान्दा राम्रो?
टोकियोमा घुम्न जाने वा बस्ने धेरै व्यक्तिले हानेदा वा नरिता कुन एयरपोर्ट छनौट गर्ने भनेर बहस गर्न केही समय पक्कै खर्च गर्छन्। टोकियोको निकटताका कारण हनेदा जबरजस्ती पहिलो विकल्प भएको कुरा सामान्य सहमति नै रहेको छ, यही कारणले गर्दा हनेदाले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्षमता बढाउने घोषणा गरेपछि धेरै एयरलाइन्सले हानेदामा आखा लगाउन थाले। ANA र JAL, अवश्य पनि ठूला विजेता थिए। यी दुइ जापानी क्यारियरले उनीहरूको धेरै उडानहरू नरिताबाट हनेदामा सार्न रोजे र केही नयाँ मार्गहरूको पनि घोषणा गरे। अमेरिकी क्यारियरहरूका लागि, डेल्टाले वर्षौंदेखि आफ्नो नारिता हब बन्द गर्न चाहेको थियो, र निर्णयहरू गरिसकेपछि उनीहरू आफ्नो उडानलाई हनेदामा सार्न सक्षम भए।
हानेदामा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल अन्य एयरलाईनमा एरोफ़्लट, एयरईतालिया, अमेरिकन, चाईना ईस्टर्न, चाईना साउथर्न, फिन्एयर, क्वानटास्, S७, सास, टर्किश, युनाईटेड, भर्जिन अस्ट्रेलिया पर्दछन।
लुफ्तान्जा जस्ता अन्य एयरलाईनले त नारिता धेरै अगाडि छोडिसकेका थिए। डेल्टा, SAS , ANA , JAL ले पनि नारिता छोडेर हानेदा रोजेपछि ग्राहकहरुको रुचाई पक्कैपनि नारिताबाट हानेदामा सरेको भन्न सकिन्छ। तर यो पुरा सत्यता भने होइन। नारिताले पनि पहिले भन्दा धेरै ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको र उडानको रुटहरु थप्दै आएको छ।
हजुर कुन एयरपोर्ट रोज्नु हुन्छ?
बिजनेस ट्राभलरको लागि हानेदा
यदि तपाईं व्यावासायीक कामको लागि टोकियो भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंको समयलाई अधिकतम सलियत पार्ने सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हुन्छ। हनेदा सहरको केन्द्रबाट एकदम नजिक भएको कारण कसैको होटेल वा अफिसमा पुग्न चाँडो र प्रभावकारी माध्याम हो। एक अफिसबाट एयरपोर्ट पुग्नको ’boutमा पनि यस्तै भन्न सकिन्छ। यसैले व्यवसायीहरू बिहान उनीहरू आफ्नो क्यारी-अन हातमा तयार गरेर अफिस र केही घण्टा काम गरे पछि हनेदाको लागि प्रस्थान गर्दछन् ताकि उनीहरू आ-आफ्नो व्यवसायिक यात्रामा जान सक्नेछन्।
लो कस्ट क्यारिअरको(एलसीसी) लागि नारिता
जबकि हनेदामा सस्ता क्यारियरहरूले सेवा पुर्‍याएका छन् (स्काईमार्कको लागि हब हुन जारीनै छ), नरितामा भने यस्ता सस्ता क्यारिअर धेरै संख्यामा एयरलाइन्स र उडानहरू छन्।
हनेदा व्यापार यात्रुहरूको लागि एक मजबूत एयरपोर्ट हब बन्न थालेपछि, नरिता एलसीसीहरूको हबको रूपमा बढ्दै गएको छ, यही कारणले गर्दा नारीता एयरपोर्टले २०१५मा टर्मिनल ३ विशेष रूपमा कम लागतका वाहकहरूको लागि निर्माण गर्‍यो।
नतिजाको रूपमा, नरिता अब पीच, जेटस्टार जापान, र जिपएयर टोकियो (JAL को नयाँ एलसीसी) को हबको रूपमा सेवा प्रदान गर्दछ। यी एयरलाइन्सका साथै अन्य एलसीसीहरू जस्तै सेबु प्यासिफिक, थाई लाइअन, थाई एयरएशिया एक्स, एयर सियोल, र एयर बुसानको उपस्थितिमा, नरिता जापान, पूर्वी एसिया, र दक्षिणपूर्व एशियामा यात्रा गर्न चाहने जो कोहीको लागि आर्थिक रुपमा रोजाईको एयरपोर्ट बनेको छ।
पुर्बी एसियाको प्रमुख सहर जान हानेदा
यदि तपाईंको योजना पूर्वी एशियाका शहरहरूबाट वा शहरहरूमा यात्रा गर्ने हो भने, हनेदा उत्तम विकल्प हो। टोकियो जस्तै, शंघाई, सियोल, र ताइवान जस्ता शहरहरूमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू छन् जुन शहर केन्द्रहरू नजिक अवस्थित छन्। हनेदाले शंघाई होंजाउ, गिम्पो र सोनहसानका लागि मार्गहरू प्रदान गर्दछ, जसले टोकियो र ती महानगरहरूको बीचमा यात्रा गर्ने मानिसहरूलाई होटल र अफिसमा छिटो जानको लागि समय को बचत गर्नेछ। यदि नरिताबाट शंघाई फ़ुडोङ्ग, इन्चियन, र तायुआनको लागि हुने उडान भन्दा यो निकै चाडो हुन्छ।
होलिडेमा घुम्नजानको लागि नारिता
ANA को सबैभन्दा सफल रणनीति मध्ये एक प्रीमियम मार्गहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नु थियो जुन प्राय व्यावासायको लागि महत्त्वपूर्ण थियो। नतिजाको रूपमा, अविश्वसनीय रूपले लाभदायक हुने होनोलुलु रुट बाहेक ANA ले कुनै पनि होलिडे घुम्न जाने मार्गहरू सेवा गर्दैन।
यदि हजुर हावाई जाने हो भने नारिता र हानेदा दुवै ठिक हुन्छ। तर नारिता एयरपोर्टमा भने अन्य होलिडे गन्तब्यको लागि पनि उडान पाइन्छ। यदि हजुर आफ्नो भ्याकेसनको लागि सेबू, क्यालेदोनिया, बोरा बोरा, फिजी वा बालि जादै हुनु हुन्छ भने हजुरको लागि नारिता उत्तम रोजाई हो।
नारिताको लिजर रुट यति महत्वपूर्ण छ कि इन्डोनेसियाको गरुडाले आफ्नो एकमात्र फर्स्ट क्लास भएको फ्लाईट बालि- नारिताको रुटमा प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी ANA ले पनि आफ्नो नया फर्स्ट क्लास सर्भिस नारिताबाट जाने नारिता- होनुलुलुमा मात्र प्रदान गरेको।
पश्चिमी टोकियोमा बस्नेहरुको लागि हानेदा, पुर्बी टोक्योमा बस्नेका लागि नारिता
टोकियो एकदम विशाल शहर हो जुन निकै फराकिलो छ। महानगर क्षेत्रले अन्य प्रान्तहरू जस्तै कानागावा (जहाँ योकोहामा अवस्थित छ), चिबा, र साईतामा शहरहरू समावेश गर्दछ। नतिजाको रूपमा, टोकियो महानगर क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आफू बस्ने ठाउँ अनुसार पायक पर्ने एयरपोर्ट रोज्छन।
पश्चिममा बसोबास गर्नेहरू ओटा कुमा पर्ने कारण हनेदाको लागि जान्छन्। एयरपोर्ट यति सुविधाजनक छ कि सिजोउका जस्तो टाढा बस्ने मानिसहरूले विदेश जाँदा पनि हानेदा प्रयोग गर्दछ।
यद्यपि शहरको पूर्वी भागमा बस्ने मानिसहरूले नरितालाई बढी सुविधाजनक पाउनेछन्।
टोकियोमा बस्नेहरूले कुन प्रमुख रेल स्टेशन उनीहरूको नजिक छ भनेर जाँच गर्नुपर्दछ। यदि उएनो स्टेशन तपाईको नजिक छ भने, तब नरिता एक उत्तम विकल्प हो ’cause स्काइलाइनर उएनो बाट प्रस्थान गर्छ। स्काईलाईनर धेरै शिङ्खान्सेन पछि, जापानको सब भन्दा द्रुत ट्रेन हो, र यो ४१ मिनेटमा नरिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुग्न सक्छ।
स्काईलाईनर एक अविश्वसनीय आरामदायक ट्रेन हो। यात्रुले तिनीहरूको सामानहरू भण्डारण गर्न, फोनहरू चार्ज गर्न, ट्रेनको बाथरूमहरू, र उनीहरूको गन्तव्यमा पुग्न नसक्दा थोरै निन्द्रा पनि प्राप्त गर्न सक्छन्।
नारिता एक्सप्रेस (एन’एक्स) पनि नरिता एयरपोर्ट जानको लागि एक उत्तम विकल्प हो, र यस ट्रेनको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यो टोकियो स्टेशन, सिन्जुकु स्टेशन, इकेबुकुरो स्टेशन, र योकोहामा स्टेशन सहित अन्य प्रमुख रेल स्टेशनहरू बाट छुट्छ। जे होस्, नरिता एक्सप्रेस एकदम आरामदायी ट्रेन हो, तर यो स्काइलानर भन्दा ढिलो छ।
अर्कोतर्फ, हनेडा टोकियो मोनोरेल र केइक्यु लाइनले सेवा गर्दछन्। केइक्यु लाइन धेरै सजिलो छ किनकि यो शिनागावा स्टेशनबाट छुट्छ, जुनयामानोते लाइन सहित अन्य धेरै ट्रेनहरूमा स्थानान्तरण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। थप रूपमा, केइक्यु लाइनका केही ट्रेनहरू तोएई आसाकुसा लाइनमा जोडिन्छ। यदि ट्रेन एयरपोर्ट लिमिटेड एक्सप्रेस को रूपमा छ भने, तब सिनागावा स्टेशन र एयरपोर्ट बीचको यात्रा मात्र ११ मिनेटको हुन्छ।
हानेदा टोकियोको नजिक भएकोले गर्दा पनि बस वा ट्याक्सी चढ्नेको लागि हानेदा सुलभ पर्न आउछ।
फर्स्ट क्लास चढ्नको लागि हानेदा
यदि तपाईं फर्स्ट क्लास उडान गर्दै हुनुहुन्छ, तब हानेदा राम्रो एयरपोर्ट हो। किनकि हनेदा प्रीमियम मार्गहरूको लागि टोकियोको एयरपोर्ट बनेको छ, यसैले यहाँ उत्तम श्रेणीको सेवाहरू फेला पार्न सकिन्छ।
उदाहरण को लागी ANA हनेदाबाट उडानहरुमा आफ्नो नयाँ बिजनेस वर्ग र पहिलो श्रेणी सीटहरु डेब्यू गरीरहेको छ। यी मार्गहरू मध्ये पहिलो लन्डन हीथ्रोको लागि थियो, अर्को न्यु योर्क जेएफकेको, र तेस्रो मार्ग फ्रान्कफर्टको लागि।
JAL को हनेदामा फर्स्ट क्लास लाउन्ज एकदम आश्चर्यजनक छ, र नारितामा भन्दा धेरै सुन्दर पनि छ।
एअर फ्रान्सले हानेदा र नारिता दुबैमा सुबिधा दिने भएता पनि हानेदाको लागिको उडानमा मात्र प्रिमियम फर्स्ट क्लास सिटको ब्यबस्था गरिएको छ।
ईमीरेट्सले आफ्नो एअरबस A380 र बोइङ्गले ७७७-३००ER मा फर्स्ट क्लास सुबिधा दिन्छ र यो हानेदा र नारिता दुवैमा छ। तर ईमीरेट्सको केहि ७७७-३००ER मा पाइने फर्स्ट क्लासको सुबिधा उनीहरुको अहिले सम्मकै बिसेष बताइएको छ र यो सुबिधा हानेदाबाट उड्ने प्लेनमा मात्र छ।
धेरै लगेज हुनेको लागि नारिता
पहिले नै भनिएझैं, नारितालाई स्काइलाईनर र एन’एक्स मार्फत सेवा दिइन्छ जबकि हनेदा टोकियो मोनोरेल र केइक्यु लाइनले सेवा प्रदान गर्दछन्। यहाँ सबैभन्दा ठूलो भिन्नता भनेको स्काइलाईनर र नरिता एक्सप्रेसले आरक्षित सीटहरू प्रस्ताव गर्दछ, जसको मतलब तपाईं सजिलैसँग चढ्न सक्नुहुन्छ र ट्रेनबाट निसंकोच ओर्लिन सक्नुहुन्छ।
हनेदा जाने बेलामा त्यस्तो हुँदैन। केइक्यु लाइन वा टोकियो मोनोरेल लिनुको मतलब अक्सर यो एक धेरै भीड भएको ट्रेन हुन्छ। यदि तपाईले यो अवस्थामा लग्गेज थप्नुभयो भने, त्यसपछि हनेडा जान धेरै समस्या हुन सक्छ। यद्यपि हानेदाबाट उडान गर्दा यस समस्याबाट बच्नको लागि धेरै राम्रो विकल्प भनेको तपाईंको सामान तपाईंको होटेल / घर वा एयरपोर्टमा डेलिभर गर्नु हो। तपाईंले यो सेवा अग्रिम बुकिंग गर्नुपर्ने हुन्छ।
जापानको आन्तरिक उडानको लागि हानेदा
हनेडाले १९७८ देखि २०१० सम्म टोकियोको घरेलु एयरपोर्टको रूपमा सेवा गरेको हुनाले जब घरेलू नेटवर्कको कुरा आउँदछ, हानेदाको कुनै प्रतिद्वन्द्वी छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सेवाहरूको विस्तार भए पनि, हानेदाबाट बर्षेनी ९ करोड यात्रीहरूले घरेलु रूपमा उडान गरिरहेका छन्।
यसका साथै JAL र ANA को टर्मिनलहरू शपिंग मल जस्तै छन् जसले रेष्टुरेन्टहरू र स्टोरहरू प्रदान गर्दछ। यहि कारण हो मानिसहरूले वास्तवमा टर्मिनल भित्र समय बिताउन झुकाव राख्छन्।
कुराकानीले यस्तो देखिन्छ जस्तो देखिन्छ कि हनेदा निशन्देह सबैभन्दा सुविधाजनक एयरपोर्ट हो, तर एयरपोर्ट रोजाईमा यो वास्तवमै धेरै फरक कारकहरूमा निर्भर गर्दछ।
अन्त्यमा, सबै जनासँग नारिता र हनेदा बीच छनौट गर्ने लक्जरी छैन किनकि त्यहाँ त्यस्तो शहरहरू छन् जहाँ एयरलाइन्सहरू केवल यी एयरपोर्टहरूमध्ये एउटामा उडान गर्दछन्। उदाहरण को लागी: यदि तपाई मेक्सिकोमा बस्नुहुन्छ वा कहीँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सम्भावना हुन्छ तपाईको उडान नारिता बाट मात्र हुन्छ। ANA र एरोमेक्सिको केवल दुइ उडानहरू हुन् जुन मेक्सिको सिटीबाट टोकियो-नरितामा उडान गर्दछन्, र हनेडा उडान गर्न छनौट गर्नु भनेको संयुक्त राज्य अमेरिका वा क्यानडामा जडान गर्नु हो।
जहाँसम्म, यदि तपाईं हानेदा वा नारीता छनौट गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुन्छ भने कुन एयरपोर्ट राम्रोसँग तपाईंको आवश्यकताहरू मिल्छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्।
Skyliner to narita